शर्माको प्रश्न : संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने ?
जुझारु शैली, सक्रियता र वैचारिक प्रस्टताका लागि चिनिन्छन्, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा । निर्वाचन परिणामपछि पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै आएका ‘सात भाइ’को समूहमा थिए, शर्मा । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रवक्ताको भूमिका दिएपछि शर्मा पार्टीभित्र रक्षात्मक बनेका छन् । श्वेतपत्रको सन्दर्भदेखि पार्टी पराजयसम्मका विषयमा प्रवक्ता शर्मासँगको कुराकानी :
श्वेतपत्र आउँदै गर्दा सायद उहाँहरू दुइटा मनोविज्ञानमा हुनुहुन्थ्यो । एउटाचाहिँ, निर्वाचनका बेलादेखि नै मतदातासमक्ष जुन सपना बाँडिएका थिए, ती सपनाको व्यावहारिक प्रयोग हुने यो बेलामा त्यसले पूर्णता प्राप्त नगर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था बन्दा के गर्ने ? ढुकुटी रित्तो भएकाले गर्न सकिएन भन्न मिल्छ भन्ने मनोविज्ञान होला । नकारात्मक दृश्यहरू देखाइदिएपछि भोलि आफूले भनेका कुरा पूरा गर्न नसक्दा अरूमाथि दोष थोपरेर आफू उम्कन मिल्छ कि भन्ने सोच होला । दोस्रोचाहिँ, अहिलेसम्म समृद्घिका लागि केही भएन, त्यसको इतिहास अब सुरु हुन्छर भयो भन्न खोजिएको देखिन्छ ।
हाम्रोमा कुनै नयाँ कथाकारले कथा लेख्न आँटेजस्तो ‘समृद्ध’ नाम गरेको नयाँ कथा यहाँबाट सुरु हुन लागेको होइन । यसको पृष्ठभूमि छ, इतिहास छ । सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू छन् । यसको आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पाटाहरू छन् । ००७ देखि ०७४ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेसको अगुवाइमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको जगमै नेपाल समृद्घ हुने हो, नेपाली सुखी हुने हो । सरकारमा रहेको पक्षले आशा वितरण गर्छ । विपक्षले चाहिँ निराशा बताइरहेको हुन्छ । विपक्षले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ, उत्तर सत्ताले दिन्छ । विपक्षले देश डुब्यो भनिरहेको हुन्छ, देश अगाडि बढिरहेको छ राज्यले भन्ने हो । तर, यहाँ उल्टो भयो । राज्यको नेतृत्व गर्नेले चाहिँ देश डुब्दैछ, धराशयी हुँदैछ भन्दैछन् । उल्टो बाटोमा हिँडेर कसरी लक्ष्य प्राप्ति होला !
उहाँहरूलाई कांग्रेसले भनेको संसदीय व्यवस्था मन पर्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुँला भनेर न केपी ओलीले राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो, न त प्रचण्डले । अब के उहाँहरूले संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने ? तर, अब उहाँहरू त्यता जान सक्नुहुन्न । त्यो देखिसकियो । अर्थनीतिको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले लिएको बाटोलाई आफ्नो पनि मान्न नसकेको र त्यसमा हिँड्न पनि नचाहेको तर यो बाटो छाड्न पनि नसकेको देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास श्वेतपत्रमै देखियो ।
पार्टीे रूपान्तरणका लागि यदि महाधिवेशन नै प्रथम र अन्तिम हुन थाल्यो भने त्यसले हामीलाई कहीँ पु¥याउँदैन । त्यसले नै आगामी चुनाव जिताउँछ भन्ने पनि होइन । हामीभित्र अहिलेसम्मकै स्थापित मनोविज्ञान के छ भने अमुक नेतृत्वको असफलताको जडमा अर्काे कुनै नेतृत्व उदाउन खोज्ने । गिरिजाबाबुमाथि प्रहार गरेर शेरबहादुर देउवाको उदय भएको हो ।
र, अब शेरबहादुरमाथि प्रहार गर्दा अर्को नेतृत्वको उदय हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । यो परम्पराले कांग्रेस बदलिँदैन । महाधिवेशनमा जम्मा एउटा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो । कांग्रेसले अबको पाँच वर्षलाई दुइटा खण्डमा छुट्याएर जानुपर्छ । महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म संगठनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको एउटा खण्ड, त्यसपछि महाधिवेशनदेखि महानिर्वाचन (स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र केन्द्र निर्वाचन)सम्म कांग्रेस पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।
ठूला वामशक्ति पुनर्गठित भइरहेको परिवेशमा कांग्रेसलाई विघटन गरेर पुनर्गठन गर्न जरुरी छैन ?
प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सबै पक्षलाई ल्याएर एउटा दल बनाउने भन्ने सुन्दा बडो सुन्दर लाग्छ । तर, त्यो अलि बढी जोखिमयुक्त हुन्छ । कांग्रेसले आफूलाई पुनस्परिभाषित र व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । कांग्रेसको आजको आवश्यकता विस्तार होइन, व्यवस्थापन हो । व्यवस्थापनको कला आफूभित्र खोज्नु जरुरी छ । हाम्रो नेतृत्वमा भएका उपलब्धिलाई ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ ।
होइन, त्यो बुझाइ गलत हो । कांग्रेस रूपान्तरणको दिशामा विश्वप्रकाश नलाग्ला ! विश्वप्रकाशचाहिँ कांग्रेसलाई ओरालो लाग्ने, परिवर्तन छेक्ने कुरामा लाग्छ कि भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि नबुझेको ठहरिन्छ । नेपाल साप्ताहिकबाट
नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुख भन्छन्, नेपालमा अब लकडाउन कडा बनाउनुपर्ने अवस्था आयो
नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुख डा. जोस भ्यान्डेलरले कोभिड–१९ विरुद्ध अपनाए...
ताप्लेजुङ । चिया र पाम तेलपछि भारतले नेपालमा उत्पादित अलैँची आयातमा पनि अवरोध गरेको छ । अलैँची नि...
कसैलाई पार्टी विभाजन भएको हेर्ने चाहना छ भने त्यो दिवा सपना मात्रै हो
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवानेता हुन् ठाकुर गैरे । उनी सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन्...
हालसम्म कोरोना निको पार्ने कुनै औषधी बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आफु सुरक्षित बस्ने नै यसबाट बच...
हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्ब...
नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला सरकारले अहिले गरिरहेको कोरोना रोकथामको प्रयासप्र...